ခေတ်ပြိုင်အတွေ့အကြုံ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 38
ဖိုးထက် – ရပ်၊ ကြည့်၊ သွား မန္တလေး သြဂုတ် ၁၉၊ ၂၀၁၄ ကိုမြင့်တိုး တစ်ယောက် မန္တလေး မရောက်တာ သုံးနှစ်ကျော်ပြီ။ သုံးနှစ်ဆိုတဲ့ အချိန်အတိုင်း အတာက ဘာမှ ကြာတာ မဟုတ်။ ဒါပေသိ သူ့လို့ မန္တလေး သံယောဇဉ်ကြီးသူအတွက် မန္တလေးနဲ့ ခွဲပြီး ရေခြား မြေခြားမှာ တစ်လလောက် နေရတာလောက်ကိုပင် အကြာကြီး ထင်တဲ့သူ။ လူလိုလို ငှက်လိုလို သတ္တ၀ါတွေ ဖြစ်ကြသည့် ကိန္ဒရာ မောင်နှံသည်ပင်လျှင် တစ်ညလောက် ခွဲရတာကို နှစ်ပေါင်း ခုနှစ်ရာ မပြီးနိုင် မစီးနိုင် ငိုကြတယ်လို့ စာတွေထဲမှာ သူဖတ်ဘူးသည်။ သူက လူ စင်စစ်။ ပြီးတော့ နှလုံးသားရှိသည်။ နောက်ပြီးတော့ မန္တလေးမြို့ကြီးက...
ဇွန်မိုး – မြန်မာပြည်သို့ပေးစာ – မှန်မှန်ကန်ကန် ဂုဏ်ပြုတင်ပြကြဖို့ သြဂုတ် ၇၊ ၂၀၁၄ သူငယ်ချင်းတို့ရေ… ဒီစာကတော့ သိပ်မရှည်ပါဘူး။ ငါလည်း ဒီရက်အတွင်း အလုပ်တွေများပြီး အချိန်အားမရှိဖြစ်နေ၊ မင်းတို့လည်း စာရှည်ရှည် မဖတ်ချင်တာနဲ့ အတော်ပေါ့။ ဘာလိုလိုနဲ့ တို့ ချစ်ရတဲ့သူငယ်ချင်းတချို့  ဒီကမ္ဘာမြေကြီးက ထွက်ခွါသွားခဲ့တာ (၂၆) နှစ်တောင် ရှိလာခဲ့ပြီ။ ဒီလာမယ့် သောကြာနေ့ သြဂုတ်လ (၈) ရက်ဆိုရင် ငါတို့တတွေ နှစ်စဉ်မပျက် ပြုလုပ်နေကြ သူတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအတွက် အလှူဒါနပြု ဆုတောင်းပေးရမယ်။ ပြီးတော့ တို့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့  လက်ချက်နဲ့ အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြတဲ့ ထောင်ပေါင်းများစွာသော (၈၈) မျိုးဆက်သူရဲကောင်းတွေကိုလည်း အောက်မေ့ဘွယ် အခမ်းအနားတွေနဲ့ တလေးတစား ဂုဏ်ပြုကြရမယ်...
မောင်ရင်ငတေ – ငါ့ရင်ထဲမှာ ဧရာဝတီ သြဂုတ် ၆၊ ၂၀၁၄ မိချောင်းရဲမြို့အနီးက ဧရာဝတီ (၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇွန်လလယ်) (Photo AMM MPE) • ဘန်ကောက်အိပ်မက်ထဲက ကျောက်ဖရားရေစီးသံ ဧရာဝတီရေ ဒီ နေ့ ဒီ ညနေမှာ အိပ်မက်တခု “စ” မက်တယ်ကွာ။ နေ့ခင်းကြောင်တောင်တော့ မဟုတ်သေးလို့ တော်သေးတာပေ့ါ။ တခြား တော့ မဟုတ်ပါဘူးကွာ။ ရေစီးသံပေ့ါ။ မင်းကို တိုင်တည်ရတာကတော့ ရေစီးသံတခု အကြောင်းမို့ပေါ့။ ငါ့နားထဲမှာ ခပ်သဲ့သဲ့ ကြားလိုက်ရတဲ့ ရေစီးသံတခုကိုကွ။ အိပ်မက်တခုပေါ့ကွာ။ အိပ်မက်ပေ့ါ။ ငါမက်တဲ့ အိပ်မက်က မသွားတော့ဘူးဆိုပြီး စိတ်ဒုန်းဒုန်းချထားတာကို မက်တာ၊ မသွားဘူးပေါ့ကွာ။ မသွားဘူးဆိုပြီး အဲဒီဘက်ကို၊ အဲဒီ...
အရှင်ဝိသုဒ္ဓ(သုတေသီ) – တစ်ခါ တစ်ယောက်
အရှင်ဝိသုဒ္ဓ(သုတေသီ) – တစ်ခါ တစ်ယောက် သြဂုတ် ၁၊ ၂၀၁၄ တစ်ခါက မက္ကစီကို ပင်လယ်ကမ်းစပ်တစ်နေရာ သောင်စပ်မှာတင်နေသော ကြယ်ငါးလေးတွေကို ကောက်ကောက်ပြီး ပင်လယ်ထဲ ပြန်ပစ်ချပေးနေသည့်လူကို အခြား တစ်ယောက်က ဘာထူးသွားမှာမို့ လုပ်နေရတာလဲဗျာလို့မေးတော့ ပြန်ပြောလိုက်တဲ့စကားက အခြား အကောင်တွေအတွက်တော့ မထူးပေမယ့် ဒီတစ်ကောင်အတွက်တော့ ထူးပါတယ်ဗျာဟူ၏။ နှလုံးသားအဟာရဟူ၍ ဆရာဖေမြင့် ဘာသာပြန်ထားသော Chicken soup for the soul ဇာတ်လမ်းစီရီးထဲက One atatime ဆိုသော ထိုဇာတ်လမ်းလေးကို ဖတ်ဘူးခဲ့သည်မှာ ကြာပြီဖြစ် သော်လည်း စိတ်ထဲစွဲနေမိသည်။ အကြောင်းအားလျော်စွာ ထိုင်းနိုင်ငံ စူရတ်ဋ္ဌာနေ ပင်လယ်ကမ်းစပ်က တံငါရွာလေးသို့ ပင့်ဖိတ်သဖြင့် ရောက်ခဲ့သည်။ ထိုရွာလေးတွင် ငါးဖမ်းလှေလိုက်သော မြန်မာမိသားစုများစွာရှိသည်။...
နီနီမာ – ကိုယ့်အသက်ကို ဖက်နဲ့ မထုပ်သော်လည်း
နီနီမာ – ကိုယ့်အသက်ကို ဖက်နဲ့ မထုပ်သော်လည်း ဇူလိုင် ၃၁၊ ၂၀၁၃ “ဟေ့ … မင်းတို့ အသက်တွေ ဖက်နဲ့ ထုပ်ထားကွ။ ဟားဟားဟားဟား” “ ခွပ်ခွပ်ခွပ်ခွပ်” ကားပေါ်စတက်တက်ချင်း ကြားလိုက်ရတဲ့  အသံကြောင့် ကြက်သီးမွေးညှင်းတွေထသွားအောင် လန့်သွားတယ်။ကိုယ့်ခေါင်းပေါ်တည့်တည့်က အော်သံကြားရာဆီ မျက်စိရောက်သွားမှ ရင်ဘတ်ထဲမှ တဖျပ်ဖျပ်ခုန်နေသော လိပ်ပြာလေးကို ကလူကလူလို့ ပြန်ခေါ်မိတော့တယ်။ ကားခေါင်းခန်းဒရိုင်ဘာထိုင်ခုံ အပေါ်ဖက် တီဗီထဲမှ နှုတ်ခမ်းမွေးကားကား မျက်နှာထားတင်းတင်းနှင့် လူကြမ်းသရုပ်ဆောင်ကြီးရဲ့  မျက်နှာကြီးက သူ့အသံလိုပင် ခက်ထန်မာကျောလှတယ်။ ရွာသူရွာသားတွေကို ကြိမ်းမောင်း၊ မြင်းခွါသံတဖြောင်းဖြောင်းနဲ့  ထွက်သွားတာကို မြင်လိုက်ရတဲ့  ခဏတာအတွင်းခရီးစဉ်တလျှောက် ဒီဇာတ်ကားကြီး မပြီးမချင်း မကြည့်ချင်မြင်လျှက်သား၊...
ကိုသန်းလွင် – ဘွဲ့ယူစာတမ်း ဇူလိုင် ၂၆၊ ၂၀၁၄ (၁) ၁၉၇၅ ခုကျွန်တော်ပဉ္စမနှစ်အရောက်မှာ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ အတွက်ဘွဲ့ယူ စာတမ်းပြုစုကြရမည်ဟု စံနစ်ကို ပြင်ဆင်လိုက်လေသည်၊ ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာအောင်ကြီး လက်ထက်မှာဖြစ်ပါသည်၊ နိုင်ငံတကာ တက္ကသိုလ် များ စံနှုံး အရဆိုပါက ဤကိစ္စ ဖြစ်သင့် သည်မှာကြာပါပြီ၊ ကျွန်တော်တို့ နောက်ဆုံးနှစ် နှစ်တ၀က် ကို စာသင်ခမ်းများ သို့ သွားရန်မလိုတော့ဘဲ စာတမ်းကိုသာပြီးအောင်ပြုစုကြရမည်ဖြစ်ပါ၏၊ ကျွန်တော်တို့ လျပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာဌာနမှာ “စွမ်းအား” နှင့် “ဆက်သွယ်ရေး” ဟူ၍ လိုင်း နှစ်လိုင်း ခွဲထား ပါသည်၊ ပထမ လေးနှစ်မှာ စာအတူတူ သင်ကြရပြီး ပဉ္စမနှစ်ရောက်သော် အတန်းခွဲ ၍သင်ကြရပါသည်၊ ကျွန်တော်တို့ ပဉ္စမ နှစ်အရောက်မှာပင် “ဆက်သွယ်ရေး”...
အရှင်ဝိသုဒ္ဓ (သုတေသီ) – စာဖတ်စေချင်တယ်ဆိုရင် ဇူလိုင် ၂၁၊ ၂၀၁၄ ဒီတစ်ခေါက် ရွာပြန်ရောက်တော့ ဦးကြီး တစ်ယောက်အိမ် အလည်သွားရင်း သားတော်မောင် မတွေ့ပါလားလို့ မေးကြည့်တဲ့အခါ ဦးကြီးလုပ်သူက စိတ်ပျက်တဲ့လေသံနဲ့ ဟိုနားဒီနားသွားထင်ပါရဲ့ဘုရားတဲ့။ တစ်ခါတစ်ခါ တော့လည်း ဖဲဝိုင်းသွားသလား မပြောတတ်ပါဘူးတဲ့။ ညီတော်မောင်ကို တွေ့တဲ့အခါမေးကြည့်တော့ ဘာမှလုပ်စရာမရှိတော့လည်း ပျင်းတယ်ဘုရားတဲ့။ အဲဒါလေးနဲ့ဘဲ အပျင်းဖြေရတယ်တဲ့။ အရက်ဆိုင်လည်း မသွားချင်ဘူးတဲ့။ ကဲ ဘာတတ်နိုင်သေး။ အရက်ဆိုင်မသွားသေးတာကိုဘဲ ချီးကျူးရတော့မပေါ့။ ရွာ့ကျက်သရေဆောင် အရက်ဆိုင်ကလဲ ရွာထိပ်မှာတင်။ လိုင်စင်ရှိ မရှိတော့ မသိ။ လူနေခွင့် လန မရှိသည် ကတော့သေချာသည်။ အမြန်ကားလမ်းဘေး ဥပစာမှာမို့ဖြစ်သည်။ ကားလမ်းဘေးမှာ အလှူရှင်တစ်ဦး ဆောက်ထားတဲ့ ဇရပ်ဘေးမှာ ကွမ်းယာဆိုင်လေးဖွင့်ရင်းကနေ တဖြည်းဖြည်း တိုးချဲ့လာလိုက်တာ ခုဆို...
ကွာလာလမ်ပူတခွင် ခရီးနှင် စံပယ်ဖြူ၊ – ဇူလိုင် ၁၆၊ ၂၀၁၄ သွားပါများ ခရီးရောက်ဆိုသလို နိုင်ငံအနှံ့ကို ကျွန်မ မရောက်ပေမဲ့ မလေးရှားရောက် မြန်မာမိန်းကလေးတစ်ယောက် ကွာလာလမ်ပူမှာ ကျက်စားနေထိုင်ရင်း တွေ့ရတာတွေကို စမြုံ့ပြန်ပြောပြချင် ပါတယ်။ ရောက်တဲ့အရပ်မှာ ကျွန်မ ပျော်အောင်မနေတတ်ပေမဲ့ တွေ့တဲ့လူနဲ့ အဆင်ပြေအောင် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရင်း ကွာလမ်ပူမှာ တော်တော်လေးကို နေသားကျနေပါပြီ။ မလေးရှားရောက် မြန်မာတွေကို အရောင်အမျိုးမျိုး ပြောင်းပေးတဲ့မြို့။ ကဗျာဆရာတွေအတွက် ရေးစရာမကုန်နိုင်တဲ့မြို့။ ဒီမြို့မှာ ကျွန်မ နေခဲ့တာ ငါးနှစ်ပြည့်တော့မယ်။ ကွာလာလမ်ပူကို မရောက်ခင်က စရင်ဘန်း (Seremban) မြို့လေးမှာ နှစ်နှစ်လုပ်ခဲ့တာ ပေါင်းလိုက်ရင် မလေးရှားမှာ ကျင်လည်နေတာ(၇)နှစ်ရှိပြီ။ အသက်အန္တရာယ် လုံခြုံမှုမရှိတဲ့ မလေးရှားမှာ အလုပ်လာလုပ်ကြတဲ့ မြန်မာတွေ ကျီးလန့်တွေလို ထိတ်ထိတ်လန့်လန့်နဲ့...
စာရေးဆရာပြဇာတ်တုို့၏ ရွှေခေတ် ဂျူနီယာဝင်း ဇွန် ၂၈၊ ၂၀၁၄The Golden Age of Writers’ Theatre Junior Win ၏ Walking Through The Wonderand ကင်ဒဲယ် အီးဘုတ်မှ The Golden Age of Writers’ Theatre ကုိုကိုယ်တုိုင်ဘာသာပြန်ထားပါသည်။ (၁၉၅၀? လောက်က ကပြခဲ့ကြသော ဒုိုင်းခင်ခင်ပြဇာတ်အတွက် အစမ်း ရီဟာဇယ် လေ့ကျင့်နေကြစဉ်။ (၀ဲမှယာ) (ဦး) သုခ၊ ဦးခင်မောင်လတ်၊ (ဒေါ်) ခင်မျိူးချစ်နှင့် (ဒေါ်) မလှသန်း။) “စာရေးဆရာပြဇာတ်“ မြန်မာပြည်မှာ မြန်မာပြည်က စာရေးဆရာတွေ တီထွင်လုိုက်တာ ဖြစ်ပါသည်။ သူတုို့က ရုပ်ရှင်မင်းသား မင်းသမီးတွေတော့ မဟုတ်ကြပါဘူး။ သုို့သော်...
Multi Level Marketing နှင့် မေကြီးရဲ့ ငွေတွင်း ဖိုးထက်၊ ဇွန် ၂၈၊ ၂၀၁၄ ခင်မင်တဲ့ အပေါင်းအသင်းတွေ မများလှဘဲ၊ ရန်သူတွေ လက်ချိုးရည်တွက် လို့ရသော ကျွန်တော့်ဘ၀မှာ အသက်ကြီးလာလေ စိုသောလက်များ ခြောက်သွေ့သွားမှာ အလွန်စိုးရိမ်ပါသည်။ လွန်ခဲ့သော တစ်လခန့်က ခရီးသွားဟန်လွှဲ ကျောင်းတုံးက မျက်မှန်းတန်းမိသော မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ကို ပြန်တွေ့သည်။ ပြီးခဲ့သော ရက်သတ္တပါတ်ကတော့ ကျွန်တော့်ကို သူက ဖုန်းတွေ ခဏ ခဏ ခေါ်လာသည်။ ကျွန်တော် အချိန်အားရှိရင် တွေ့ချင်တယ်တဲ့လေ။ အားချင်ရင် အားပြီး မအားချင်ရင် သေမင်းကလွဲလို့ သိကြားမင်းတောင် ထ မတွေ့ချင်သော ကျွန်တော့်အတွက် အိမ်နားအထိ အရောက်လာမည်ဆိုသော သူ့အတွက် “အားပါတယ်ဗျာ..တွေ့တာပေါ့” ဟု ဆိုကာ တွေ့ဖြစ်ခဲ့သည်။...
Page 38 of 47«1...3637383940...47»
ကာတွန်း ATH ရဲ့ ရွာသားတွေ https://t.co/LNpyAskI2b https://t.co/AVtbQVL18i about 12 hours ago ReplyRetweetFavorite